အချစ်က လှပစေတယ် - Hello Sayarwon
အချစ်နဲ့တွေ့ရင် မြင်သမျှ တွေ့သမျှတင် လှနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်မှာလည်း အလှတိုး လာပါတယ်နော်။ အချစ်က သင့်ကို လှပစေတဲ့ ကုထုံး တစ်ခုဆိုရင် ထူးဆန်း နေမလား………………
အချစ်က သင့်ကို အလှတိုးစေတဲ့ အရာပါ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ဖို့တော့ လိုမှာပေါ့။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်က အချစ်ခံရတဲ့ အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် အသားအရေတွေက ပြောင်းလဲလာပြီး အလှတွေလည်း တိုးလာပါတယ်။ စွဲစွဲမြဲမြဲ ချစ်တတ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလို့ပဲ ဆိုရမလား။
လူတစ်ယောက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ချစ်တဲ့အခါ အခုလို အလှအပဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသတဲ့။
ချစ်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့ စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ဂရုစိုက် ကြင်နာမှုတွေက အချစ်ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ အောက်စီတိုစင် ဟော်မုန်းတွေကို ထွက်ရှိစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေလို့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းနေစေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းပြီး စိတ်ခံစားမှု ကောင်းနေမှတော့ အလိုလိုကို ​ကြည့်ကောင်းနေပြီဆိုတာ အသေအချာပေါ့။
အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်မှာ ရုပ်အိုမှာ ကြောက်ရင် ချစ်လိုက်ပါ။ ချစ်တာက ကော်လာဂျင်တွေ ထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် အသားအရေကို အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်နော်။
အချို့သူတွေ အရွယ်တင် ကြတယ်နော် ဆိုတာက ချစ်တတ်သူတွေ မို့လို့ပါ။ ကဲ..အရွယ်တင်နုပျိုချင်တယ် ဟုတ်။ ချစ်ကြည့်လိုက်လေ။
အသားလေး glow လာပါလိမ့်မယ်
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင်၊ အပြေးလေ့ကျင့်ရင် အသားလေး glow တယ်နော်။ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း အသားအရေလေးက ပန်းရောင်သွေးကြွယ်လို့ glow ပါတယ်နော်။
ဒါက ချစ်တဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှား ခံစားရမှုတွေက အသားအရေကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ထားသလိုကို glow စေတာပါ။ love glow လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်က ဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးတွေဆီ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု ကောင်းစေပြီး မျက်နှာလေးမှာ ပန်းရောင်သွေး ကြွယ်စေတာပါ။
ချစ်ခြင်းရဲ့ နောက်ထပ် အလှအပ တစ်ခုက အသားအရေကို ဝက်ခြံကင်းပြီး ကြည်လင် လှပစေတာပါတဲ့။ ချစ်တဲ့အခါ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံတွေကို ကင်းလို့ လှပစေတာပါ။
ကဲ… ချစ်တာက ဝက်ခြံကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဆိုတော့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ဝက်ခြံ ကင်းကြစို့လား…………
ချစ်ခြင်းအားဖြင့် လှပစေမှုမှာ အသားအရေ အပြင် ဆံပင်လည်း ပါပါသေးတယ်။ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာကို သက်သာစေသလို ဆံသားကို နက်မှောင် သန်စွမ်းစေပါတယ်။
ကျန်းမာ နက်မှောင်တဲ့ ဆံသားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်ခြင်း တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးဖို့ ပြောပါရစေ။
ကဲ…. ချစ်ခြင်းအားဖြင့် လှပတယ်ဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ကြည့်ကြစို့လား………
5 Surprising But Fabulous Beauty Benefits Of Love! https://thehauterfly.com/beauty/5-surprising-but-fabulous-beauty-benefits-of-love/ Accessed Date 1 September 2020
What Does Being in Love Do to Your Skin? https://www.byrdie.com/skin-emotions Accessed Date 1 September 2020
Love IsaBeauty Treatment https://www.youbeauty.com/love/relationships-beauty-health/ Accessed Date 1 September 2020